यसकारण झर्छ कपाल - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ सौन्दर्य स्वास्थ्य ∕ यसकारण झर्छ कपाल
यसकारण झर्छ कपाल
सृजना मगर सोमबार, २०७६ साउन २७ गते, १२:२० मा प्रकाशित
प्रा. डा. सविना भट्टराई
वरिष्ठ छाला रोग विशेषज्ञ तथा कस्मेटिक सर्जन, काठमान्डौ मेडिकल अस्पताल
के तपाई बारम्बार कपाल झरेर चिन्तित बन्नु भएको छ ? उमेर नपुग्दै कपाल झर्दा आफूमा बुढ्यौलीले छोयो भन्ने तनाब त हुनुहुन्न ? निश्चिय पनि उमेरसँगै मानिसको कपाल पनि पातलो हुँदै जान्छ । तर, युवा अवस्थामै अधिकांश कपाल झरेको छ भने यो रोग हुन सक्छ । कपाल झर्नुको विभिन्न कारण हुन्छन् ।
हामी बच्चादेखि वयस्क हुँदै बृद्ध अवस्थामा पुगे जस्तै हाम्रो कपालको पनि आयु हुन्छ । यसको पनि तीन/तीन महिनाको आफ्नै चक्र हुन्छ । यी हुन कपाल झर्नुका कारणः
थाइराइड तथा सुगर
शरीरमा रक्त अल्पता
शरिरमा विकिरणको प्रभाव
हार्माेनल तथा इन्डो प्रिडलका कारण
सर्वप्रथम हामीले कपाल झर्नाका कारण पहिचान गर्नुपर्दछ । यसैगरि हामीले बजार खानेकुरा जथाभावी खाना नखाई प्रोटिनयुक्त खानाको प्रयोग गर्नुपर्दछ । दैनिक खानामा दुध, अण्डा तथा केरा खादा हाम्रो शरीरमा पौष्टिक आहाराको कमी हुदैन । बजारमा उपलब्ध औषधिको प्रयोगद्धारा कपालको जरा मजबुत बनाउन सकिन्छ ।
चाँयाको कारण पनि कपाल झर्ने हुदा चाँयाबाट जोगिनुपर्छ । चायाँबाट बच्न दैनिक नुहाउने तथा सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनु पर्दछ । थाइराइड, सुगर तथा क्यान्सरका कारण पनि कपाल झर्ने हुदा हामीले समय समयमा शरीर परीक्षण गर्नुपर्छ ।
यसैगरि, विभिन्न औषधि तथा स्याम्पुहरुको प्रयोगका कारण कपाल झर्ने भएकोले त्यस्ता सामाग्रीहरु प्रयोग गर्नुपुर्व सम्बन्धित चिकित्सकसँग परामर्श लिनु पर्दछ ।
कपाल अत्याधिक झरेमा नयाँ पद्धति पिआरपि नामक पद्धति अपनाउन सकिन्छ । यस अन्र्तगत आफ्नै शरीरको रगत निकाली त्यसमा भएको ग्रोथ फ्याक्टरलाई कपालमा इन्जेक्ट गरिन्छ । जसले नयाँ कपाल उमार्न मद्दत गर्दछ ।